ग्यालेक्सी एस ८ र ग्यालेक्सी एस ८ प्लस
काठमाडौं । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस ८ र ग्यालेक्सी एस ८ प्लस नेपाली बजारमा उत्कृष्ट मोबाइलको रूपमा कहलिएका छन् । यी स्मार्टफोनमा सिनेमाटिक भ्युइङ अनुभूति हुनेगरी स्क्रिन राखिएको छ । यसमा उत्कृष्ट लो लाइट क्यामेरा र व्यक्तिगत सहायकका रूपमा बिक्सबी जडान गरिएको छ । ग...
भर्जिनियाबाट उड्यो नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह, शुक्रवार बिहान आइएसएस डकिङमा जोडिने
वैशाख ५, काठमाडौं (अस) । इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको छ । बिहीवार बिहान २ः३१ बजे अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यबाट ‘नेपाली स्याट–१’ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको हो । योसँगै नेपाल पनि अब भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा परेको छ । नेपाल विज्ञान प्रविधि...
नेपालको दूरसञ्चार सेवा विश्वकै महँगो
युवराज बस्नेत काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार सेवा अन्य मुलुकको तुलनामा दोब्बर महँगो भएको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत हुने महालेखाले ठहर गरेको छ । अधिक नाफा कमाउने तर महँगोमा उपभोक्तालाई सेवा दिने कम्पनीहरूबारे नियमन गर्न प्रतिवेदनमा...
स्मार्टफोन सम्बन्धी केही गलत बुझाइ
काठमाडौं । रश्मी थापाले मोबाइललाई रातभर चार्जमा राखे पनि खासै खराबी हुँदैन भनेर कतै सुनेकी थिइन् । तर, उनले ठोकुवासाथ दाजुसँग प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि मोबाइल खरीद गरेकै दिन गाली खानुपर्‍यो । उनले त्यो दिन दाजुसँग डिफेन्स गर्न सकिनन्, तर भोलिपल्ट उनले दाजुलाई वास्तविकता देखाई कन्भिन्स गराइन् । वास्तव...
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिएको इन्टरनेट स्पीड आफूले खरीद गरेकोभन्दा कम भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, इन्टरनेट स्पीड सोहीअनुरूप आएको छ कि छैन भन्ने जान्न समयसमयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । इन्टरनेट स्पीड जति बढाउँदा पनि खासै प्रगति नभएको पनि हुन सक्छ । यस्तोमा सेवा प्रदायकले सबै ठीक छ भन्ने जवाफ...
स्मार्ट टीभी खरीद गर्नुअघि
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा टेलिभिजन खरीद गर्ने सोच गरेका साँखु, काठमाडौंका अरुण महर्जन कुन सेट किन्ने भन्ने अन्योलमा छन् । एनालग टीभीमा सुविधा हट्दै गएका कारण उनले स्मार्ट टीभी खरीद गर्ने योजना बनाएका हुन् । केबल अपरेटरहरू र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दिने सेवा स्मार्ट टीभी केन्द्रित भएका कारण नयाँ एचडी...
जग्गासम्बन्धी जानकारी दिने एप ‘भूमि सुशासन’
काठमाडौं (अस) । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने मोबाइल एप भूमि सुशासनबाट जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ । एपमा भूमिसम्बन्धी कानूनसमेत समेटिएको छ । मोबाइल एपमा भूमि नापजाँच सम्बन्धी जानकारी पनि समेटिएको छ । एपमै मालपोत, नापीलगायत कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने व्यवस्था छ...
चर्चा पब्जीको : क्रेजी तर घातक गेम
काठमाडौं । पाटन अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा आमा दम र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण छटपटिरहेका थिए । कुरुवा बसेका २०वर्षीय छोरा भने मोबाइलमा घुरिरहेका थिए । चिकित्सक आउँदा पनि ती कुरुवालाई कुनै मतलव थिएन । भोलिपल्ट ती बिरामीका अर्का छोरा कुरुवा बस्न आए । तर उनी पनि मोबाइलमै व्यस्त देखिन्थे । नजि...
कसरी काम गर्छ स्पेस स्टेशनले ?
अन्तरिक्षको विषयमा जानकारीका लागि राखिएको अन्तरिक्ष विमानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) भनिन्छ । यसलाई पृथ्वीको कक्षमा राखिएको छ । यो अन्तरिक्षमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको घर पनि हो । यो फरक किसिमको वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो । यो स्टेशनमा विश्वका केही मुलुकले सँगै काम गरिरहेका छन् । आईएसएस पृ...
फागुमा मोबाइलको सुरक्षा
रामकुमार लामिछाने काठमाडौं । फागु खेल्ने रहर कसलाई पो हुँदैन र ? तर यो पर्वमा कतिपयलाई भने विगतमा मोबाइलमा पानी पसेर हैरान भएको सम्झना पनि आउँछ । मोबाइल नलिईकन फागु खेल्न जाऊँ त फोटो खिच्न समस्या र साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न पनि तनाव हुने, लिएर जाऊँ पानी र रङ पस्ने चिन्ता । मोबाइल राखेको पकेटलाई जसोत...